Wondershare MobileTrans User Guide - Kies ndabere ka iOS
Gbalịa Ọ Free N'ihi Windows Buy Ugbu a
WinPhone ka iOS
Gam akporo na Android
Gam akporo na iOS
iOS ka Android
iOS ka iOS
Symbian ka Android
Symbian ka iOS
Gam akporo na WinPhone
WinPhone ka Android
iOS ka WinPhone
Ndabere ka ekwentị
Kies ndabere ka iOS
OneDrive ka iOS
Kies ndabere ka Android
Blackberry ndabere ka iOS
Blackberry ndabere ka Android
iCloud ndabere ka iOS
iCloud ndabere ka Android
iTunes ndabere ka iOS
iTunes ndabere ka Android
OneDrive ka Android
Ndabere ka PC
Ndabere iOS ka PC
Back Up Android ka PC
Ndabere Symbian ka PC
Back Up WinPhone ka PC
Ihichapu Android Ngwaọrụ
MobileTrans Guide: Kies ndabere ka iOS
Nzọụkwụ 1. Open Wondershare MobileTrans.
Nzọụkwụ 2. Pịa "Weghachi Site Backups", na-ahọrọ "Kies" ke nhọrọ ọkọnọ ..
Nzọụkwụ 3. Jikọọ gị iOS ngwaọrụ gị na kọmputa na iji eriri USB na-eche maka MobileTrans na-aghọta na ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 4. Họrọ faịlụ ụdị ị ga-achọ nyefee site n'inyocha igbe megide onye ọ bụla faịlụ ụdị.
I nwekwara ike pịa "Tinye ndabere faịlụ" ma ọ bụrụ na ị ga-achọ nyefee a faịlụ na adịghị na egosipụta backups.
I nwekwara ike ikpebi ikpochapụ niile data na iOS ngwaọrụ tupu edegharị ọhụrụ ọ bụla ọdịnaya. Dị nnọọ ego na "Doro Anya data tupu oyiri" igbe.
Nzọụkwụ 5. Pịa na "Malite Copy" iji malite usoro. Nọgidenụ na-iOS ngwaọrụ ejikọrọ site dum usoro.
Wondershare MobileTrans - 1 Pịa na ekwentị ekwentị Nyefee Software
Ọ bụghị naanị kọntaktị, transfer SMS, oku na ndekọ, photos, music, videos, ngwa ọdịnala, wdg
Weghachi ndabere ọdịnaya site Blackberry, iCloud, iTunes, Kies na ndị ọzọ na-Android na iOS ngwaọrụ.
Na-adịgide adịgide ihichapu niile ọdịnaya site na gị ochie ekwentị kpuchido nzuzo gị na-leaked.
-Arụ ọrụ na 3,000+ ntị gụnyere Droid, Symbian (Nokia), na ihe nile ụdị nke iPhones, gụnyere Kacha ọhụrụ iOS 9 ngwaọrụ.
Na-enyefe ọdịnaya n'etiti igwe na dị iche iche na netwọk. AT & T, Verizon, Sprint, T-Mobile - enweghị nsogbu!
Zero àgwà ọnwụ & ize ndụ-free: ihe niile ị nyefee bụ 100% otu dị ka ihe mbụ na ike ga-nanị na-agụ site onwe gị.
Ọzọ: OneDrive ka iOS